तपाईको अमेजन व्यापारको लागि सबैभन्दा राम्रो बिक्रि सफ्टवेयर कस्तो छ?
सबैलाई पैसा बनाउन मनपर्छ, र अमेजनले यसलाई सबै सम्भावना प्रदान गर्दछ. यही कारण अमेजनमा प्रमुख व्यापार हाम्रो दिनहरूमा धेरै प्रचलित छ. अधिक ईकमरस व्यवसायहरूले आफ्ना उत्पादनहरू अमेजनमा प्रक्षेपण गर्छन् जसले यस प्लेटफर्मको प्रतिस्पर्धी बनाउँछ. अझ के हो, अमेजनले तपाईंको उत्पादनहरू खोजमा देख्न सकिने आधारभूत अनुकूलन दिशानिर्देशहरू पछ्याउन आवश्यक छ.
यदि तपाईं अमेजनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, यो अमेजन अमेजन सफ्टवेयरको लागू नगरी तपाई अमेजन खोजीको शीर्षमा जान्न गाह्रो हुन सक्नुहुन्छ।. यस लेखमा हामी अमेजनमा बिक्री गर्न चाहनेहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो अनलाइन बिक्रेता सफ्टवेयर छलफल गर्नेछौं.
तपाईंलाई Amazon सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नु पर्ने प्राथमिक कारणहरू
महत्त्वपूर्ण मुनाफा बनाउनको लागि, तपाईंलाई आफैंमा लगानी गर्न आवश्यक छ।. अमेजन सबै समय र पैसा दुवै भन्दा माथिल्लो लगानी हो. यदि तपाईंले आफ्नो काममा यी पक्षहरू राख्नुभयो भने, तपाईंले प्रत्येक महिना अपेक्षाकृत निष्क्रिय लाभलाई रोक्नुहुनेछ. यद्यपि, हामी सधैँ बढी आवश्यक छ; यो संसारले काम गर्दछ.
एक दिनमा केवल 24 घण्टा मात्र छन्, र अमेजन व्यापारीहरू पनि सुत्न आवश्यक पर्छ. त्यसो भए, यदि आफ्नै मार्फत सबै चीजहरू व्यवस्थापन गर्न, तपाईं आफ्नो काममा आफैं गुमाउने जोखिममा हुनुहुन्छ. कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंलाई अनुसन्धान, स्केलिंग, ट्र्याकिङ र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ, धेरै डेटा म्यानुअल रूपमा तुलना. र के बारे मा पैकिंग र सैकड़ों आदेश शिपिंग एक दिन को बारे मा? होइन, यो साँच्चै असंभव छ. अमेजनले तपाईंको जीवनलाई एक पेशेवर पूर्ति संग प्रदान गर्न सजिलो बनाउन सक्छ. यसको मतलब तपाईको सबै शिपिंग, डिलिवरी र समर्थन मुद्दाहरु अमेजन द्वारा संचालित गरिनेछ. तपाईं उत्पादनहरू गोदाममा जहाज गर्न सक्नुहुन्छ र मात्र आफ्नो अमेजन व्यापारको निर्माणमा केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ. यद्यपि, यो युद्धको आधा भाग हो. प्रत्येक व्यवसायको आवश्यकता बढ्छ, त्यसैले तपाईलाई आफ्नो कामको दिनको ठूलो भाग को विकास गर्न को लागी तपाईंको व्यवसाय विकास गर्न आवश्यक छ. तपाईंले आफ्नो सूचीमा काम गर्न, नयाँ लक्षित कीवर्ड खोज्नुहोस्, अमेजन SERP मा उत्पाद स्थितिहरू ट्र्याक गर्न, थप वस्तुहरू सुरू गर्न र आफ्नो व्यापार जागरूकता बढाउन र राजस्व बढाउन ग्राहक सेवा सेवाहरू सुधार गर्न आवश्यक छ।. र यो सबै धेरै समय र प्रयासहरू लाग्छ. त्यसैले तपाईलाई केहि अतिरिक्त सेवाहरू चाहिन्छ जसले तपाईंलाई यी सबै चीजहरू व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ. सम्झनुहोस्, तपाईंलाई आफ्नो व्यापारमा काम गर्न आवश्यक छ, यो होइन. एक नियमको रूपमा, व्यापारीहरूले ठूला सम्पत्ति कमाउँदै आएका छन्, सबै उत्पादनलाई छान्नु हुँदैन वा सानो विवरणको बारेमा चेतावनी.
त्यसैले, तपाईसँग तपाइँको स्वास्थ्य अमेजन व्यापार विकासको भिन्नता छ. तपाईं या तो घर विश्लेषक र एसईओ विशेषज्ञहरु लाई रोजगार गर्न सक्नुहुन्छ वा स्वचालन र अमेजन सफ्टवेयरमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ. मेरो लागि, छनौट स्पष्ट छ. अनलाइन उपकरणहरू प्रयोग गर्दै, तपाईं अगाडी एडो बिना सबै केहि गर्न सक्नुहुनेछ. यो तपाइँको Amazon सफलताको कुञ्जी हो. त्यसोभए, हामी आवश्यक अमेजन अनुकूलन र अनुसन्धान सफ्टवेयरमा छलफल गर्नेछौं जुन तपाईंको र तपाईंको अमेजन व्यवसाय विकासको लागि काममा आउनेछ.
तपाईंको रैंकिंग सुधार को लागि सर्वोत्तम अमेज़न सफ्टवेयर
उत्पादन को चयन
तपाईंलाई एक विजेता जस्तै तपाईंको ईकॉमर्स गेम को शुरू गर्न को आवश्यकता हो।. त्यसकारण, यो सबै भन्दा आवश्यक लाभदायक बजार आला र उत्पादन कि तपाई खुदरा हुनेछ चयन गर्नु आवश्यक छ. यस कार्यलाई सरल बनाउनका लागि तपाई जंगल स्केआउट उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. यस उपकरणले तपाईंलाई अमेजन उत्पादनहरू खोज्न, छिट्टै र कुनै पनि अनुमान लगाउन बिना खोज्न मद्दत गर्नेछ. जंगल स्केउट उपकरण प्रयोग गर्दै, तपाईं जोखिम कम गर्न र लाभ बढाउन सक्नुहुनेछ किनभने यसले उद्योगको सबैभन्दा भरोसेमंद अमेजन बिक्रीको डेटाद्वारा ब्याक अप गर्न मद्दत गर्दछ र महंगी त्रुटिहरूबाट जोगिन सक्छ।. यो वेब अनुप्रयोग अमेजन उत्पादहरू र सूचनाको एक विशाल डेटाबेस खोजी गर्न अनुकूल फिल्टर प्रणाली प्रदान गर्दछ. यहाँ तपाइँ कोटिहरू छान्नुहोस्, बेस्ट बिक्रेता रेटिङहरू, बिक्री, समीक्षाहरू, र त्यसमा लक्षित गर्न सक्नुहुन्छ.
त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन् जुन तपाईं जङ्गले स्कोउट सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ - वेब एपको रूपमा, वा क्रोम एक्सटेन्सनको रूपमा.
वेब एपको रूपमा प्रयोग गर्दै, तपाईले सम्पूर्ण अमेजन सूचीमा आकर्षक नग्न र उत्पादनहरू फेला पार्न अवसर पाउनुहुन्छ।. यो एक्स्टेन्सनले तपाईंलाई सम्पूर्ण अमेजन डाटाबेसलाई श्रेणी, मूल्य, बिक्री, र अन्य मेट्रिक्सद्वारा फिल्टर गर्न मौका दिन्छ।.
यदि तपाइँ क्रोम एक्सटेन्सनको रूपमा जंगल स्कोउट उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ ब्राउज गर्दा तपाईका उत्पादन विचारहरू अन्वेषण गर्न र प्रमाणिकरण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।. तपाईं सटीक उत्पादन तुलनाको लागि प्रत्येक उत्पादनको मूल्य, अनुमानित बिक्री, समीक्षा गणना र थप डेटा पनि जाँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ.
यस उपकरणको हानिहरूमा, म निम्न-आवर्ती बिल गणना गर्न सक्दछ, केवल सात दिनको परीक्षण अवधि र पूर्ण डेटाबेस होइन.
एकपटक तपाईंले खुदरा उत्पादन गर्न चाहने उत्पादनको बारेमा एकपटक, तपाईंले भौतिक उत्पादनहरू पाउनुपर्छ. उत्पादनहरू खोज्दै र नमूनाहरू एक अपरिहार्य बोतलबंद हो जुन तपाईंको Amazon मार्केटिंग अभियानको सुरुवात चरणमा मिस गर्न सकिदैन।. यो काम प्राय: डरलाग्दो छ, किनकी मुख्य आपूर्तिकर्ताहरू प्रायः विदेशी छन्. तथापि, राम्रो सप्लायर पत्ता लगाउन तपाईंलाई लाग्छ जस्तो लाग्छ. हामीलाई केहि उपकरणहरू गणना गर्नुहोस् जुन यस कामको साथ सहयोग गर्न सक्छ.
अलिबाबा एक प्रसिद्ध चीनी मंच हो जहाँ तपाईं थोक मा खरीद सकते हो. अधिकांश वस्तुहरू यहाँ आधारित छन् एशियामा निर्मित. यसैले अमेरिका र युरोपमा उत्पादित तुलनात्मक तुलनामा तिनीहरूको मूल्य उच्च छैन. त्यसैले, अलिबाबा तपाईंको सबैभन्दा राम्रो शर्त हो. पहिलो नजरमा, यो प्रचण्ड जस्तो देखिन्छ, तर तपाईलाई मात्र सुरू गर्नु पर्छ. पहिला, तपाईंलाई अनुरोधहरू खरिद गर्न आवश्यक छ, त्यसपछि खोज उत्पादन प्रसाद र ईमेल वा स्काइप मार्फत आपूर्तिकर्ता संग सम्पर्क गर्नुहोस्. पहिलो, तपाईले विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूको उत्पादन नमूनाहरूको गुणस्तर तुलना गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ. तपाईं सजग हुनु पर्छ कि धेरै आपूर्तिकर्ताहरू केवल व्यापारिक कम्पनीहरू हुन् जुन चीजहरू सजिलो बनाउन सक्दछन् तर बढी महँगो बनाउन सक्छन्. यसबाहेक, यो उल्लेख गर्न योग्य छ कि अलिबाबा को मूल्य निर्धारण मा केवल एकदम मामूली अंतर संग नमूने को लागी Aliexpress जरूरी छ. यद्यपि, यो साइट अन्य चीनी व्यापारिक प्लेटफार्म भन्दा बढी वैध छ.
अलिबाबा संग सहयोग को कोष मा, म निम्नलिखित को संख्या गिन सक्छ:
यो शुरू गर्न डरावना हो;
त्यहाँ धेरै स्क्यानरहरू छन्.
यी आवश्यक चीजहरूले तपाईंलाई राम्रो सुरुवात गर्न मद्दत गर्नेछ. यद्यपि, उत्पादन सामान्यतया समय लाग्छ. त्यसोभए, तपाईं सिर्जना र अनुकूलनकरण सूचीबद्ध गरेर यसलाई यो समय कुशलतापूर्वक खर्च गर्न सक्नुहुनेछ Source .